Dream Of Inferior Poem Club: September 2009
0 COMMENTS POSTED BY : Minn Yoon Thit TIME : Monday, September 28, 2009
မလိမ်မိုး မလိမ်မာတွေ နှုတ်လန်ထိုးကြတဲ့ပွဲ....
မမှန်မဟုတ် လန်ကြုတ် ကြတဲ့ ပွဲ
အပြုစကားတွေနဲ့ မုသားတွေ လှလှကြီး သုံးတတ်ကြတဲ့
ခပ်ကဲကဲ ဂရုဏာတော်တွေ အထွေးလိုက် သွန်မှောက်ချပြတဲ့ပွဲ...
အိမ်ကြက်တွေရဲ့ မြိန်ရည်ယှက်ရည် အိုးမဲသုတ်ကြတဲ့ပွဲ...
ရီစရာ၊ ပလီပလာ၊ မျက်ရည်လည်ရွှဲ၊
တခါတလေ နက်နက်နဲနဲ..၊ တခါတလေနင့်ခနဲ၊ တခါတလေ မချင့်မရဲ..
ရသပေါင်းစုံနေပြီး ကိုယ့်အရပ် ကိုယ့်ဇာတ်နဲ့
ကိုယ့် မင်းသား၊ မင်းသမီးကြီးတွေ မနားတမ်း ကပြနေကြတဲ့
အော်...ကျုပ်တို့ မြို့ရဲ့... ပဒေသာပြဇာတ်သဘင်ပွဲ...။
LABELS : မင်းယွန်းသစ်
ဗော့ဒ်ကာ တခွက်နဲ့ ပြည့်လျှမ်းလို့...
ဆာလောင် မွတ်သိပ်မှုကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပေမယ့်
ကျွန်တော်တို့ဟာ အသိဉာဏ် မဲ့တုံးနေတဲ့ ကောင်တွေ မဟုတ်ဘူး
ရွတ်နေကြတဲ့ သေချင်းဆိုး ဖက်ရှင်သမားတွေထက်စာရင်
မမှန်ဘူး ဒါပေမယ့် မှားတယ်
မမှားဘူး ဒါပေမယ့် မှန်တယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးမယ့်
တနေကုန် တနေခန်း ခါးနေရင်တောင်
မရဲတရဲ အလင်းတွေနဲ့ လာမလင်းနဲ့
အိမ်ပြန်ချိန် ပျောက်တဲ့ လမ်းတစ်ခုကို
ကျရှုံးခန်းတွေ အထပ်ထပ် လွတ်ကျခဲ့ရင်တောင်
ဂျီးအလိမ်းလိမ်း ထနေတဲ့ နံရံတွေ ပြိုကျ
တံခါးပေါက် မရှိတဲ့ ဟင်းလင်းပြင်ကို ငါတို့မက်တယ်...
ကျုပ်တို့ဟာ ခပ်ရဲရဲ ရှေ့ထွက် အော်ဆဲရဲတဲ့ ကောင်တွေ ဖြစ်တယ်...
ကဲ.... ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် စီးချင်းထိုးမယ်....။
(မနေ့က ညနေက ကိုမြေမှုန်လွင်၊ ကိုသိုးထိန်း၊ ကိုမိုးလှိုင်ည အပါအ၀င် အခြားသော ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာများ နှင့် စကားစမြည်ပြောရင်း တထိုင်တည်း ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး ဖြစ်ပါတယ်။)
နှင်းဆီတွေနဲ့ ယက်တဲ့ ဧပရာယ်
1 COMMENTS POSTED BY : ရိုးရာ TIME : Monday, September 21, 2009
ဘယ်သူမှထူးပြီး မှန်မလာတော့ဘူး ။
ဘယ်ရင်ဘတ်မှ ပိုမနာခဲ့ပါဘူး ။
နင်လည်းငါ့လို ၊ ငါလည်းနင့်လို
မာနနဲ့ပေါက်တမ်း ကစားမိခဲ့တာကိုး ။
ငါ. . . ကဗျာတစ်ပုဒ်ရွတ်နေတယ် ။
နင်ကြည့်ပါ ၊ သိပါ ဧပရာယ်
ကြက်ခြေခတ်တွေ ခြစ်ခဲ့မိကြတယ်. . . ။ ။
LABELS : ရိုးရာ
0 COMMENTS POSTED BY : ရိုးရာ TIME : Friday, September 18, 2009
ရထားဟာ ကမ်းကိုကပ်ခဲ့ပြီ ။
မြို့ကြီးရယ် . . .
ရနံ့တွေက လှောင်တယ် ။
၀တ်မှုန်ရေ. . .
တနင်္ဂနွေမှာပဲ `နားမယ်´ ။ ။
ခေါင်းစဉ် - ဇာတိ
0 COMMENTS POSTED BY : ဇာတိ TIME : Tuesday, September 15, 2009
ဝတ်မှုန်လေးတွေ အချင်းချင်း စကားများကြရင်း
နှင်းဆီတွေပွင့်ဖို့ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြတယ် ၊၊ ၊၊
တစ်ခြားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ကြရ …. ၊၊
တနင်္ဂနွေ နဲ့ ငါဟာ
နင်နဲ့ငါ ဝေးသလိုမျိုး ဝေးသွားတယ်
ငါ့ တစ်ဝိဥာဉ်စာ လက်ခံထားရဆဲ. . . . ၊၊
အတိတ်ကနေ လက်ရှိကမ္ဘာဖြစ် ဖြစ် သွား တာ
ဒုက္ခမီးအိမ် တစ်လုံးပါ ၊၊ ၊၊
LABELS : ဇာတိ
ကြယ်တွေ ကလည်း အုံ့မှိုင်းလိုက်၊ ကြွေလိုက် . . .။
မြေခတာ ဓမ္မတာဖြစ်နေတဲ့ လောကအထာကိုလည်း၊
ငါ နပ်လိုက်၊ မနပ်လိုက်။ ။
ချစ်သူ . . . . .
ဖြူဝင်းသေးသွယ်တဲ့ စကားလုံးအဟောင်းတွေ ဟောင်းလောင်းပွင့်လို့၊
ရေကွက်နောက်ခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက် . . . ၊
မျက်ရည်တွေကြောင့် သံစဉ်တစ်ခုကို ပျံ့လွင့်နေစေတယ်။
ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲ ဖြစ်နေတဲ့ ခပ်ရှရှ ခါးသီးသီး ဒိုင်ယာရီတစ်အုပ် ထဲမှာ
ဟိုးအဝေးက ဆီနှင်းတွေ တဖွဲဖွဲနဲ့ ကွေးညွတ်ဖြာကျ။
အမှောင်ကွယ်ပြီး သိမ်းထားတဲ့ အသက်ရှုသံတိုးတိုးလေးတွေ
နှလုံးသွေးတွေ၊ ခေတ်တွေ၊ ဘယ်နှစ်ကြိမ်တိုင်ခဲ့ပြီလဲ။
မပွင့်ခင်ကြွေခဲ့ရတဲ့ နှင်းဆီလွမ်းခန်း ။ ။ ။
LABELS : လင်းနီညို
သူများကို ကျွေးရင်း ကိုယ်ပါစားမိတယ်....။
လိမ်နေတဲ့လူကို အပြစ်ပေးတာမှ မဟုတ်တာ
ရယ်ရင်းနဲ့ ငိုခဲ့တယ်....ပြုံးရင်းနဲ့ မဲ့ခဲ့တယ်.....။
ချစ်ရင်းနဲ့မုန်းခဲ့တယ်..... လွမ်းရင်းနဲ့ မေ့ခဲ့တယ်....။
ငါ့ကိုဖမ်းမိသူတော့ နည်းနည်း ငန်ကျိကျိဖြစ်မယ်.....။
ကိုယ်မာယာကို ကြိုးချည်ပြီး သိမ်းထားချင်လို့...
မာ....ယာ.....တွေ....ခါး.......တယ်........လို့ ၊၊ ၊၊
LABELS : ပိုးဥ
"ဒီမှာလိုပဲ ... ခင်ဗျားတို့မြို့မှာလည်း ... "
ဖိတ်တစ်ဝက် စင်တစ်ဝက်ချင်း ...
"သြော် ... ဟုတ်လား
အိုကေ ... အိုကေ
နေဦး ... နေဦး
ဒီမှာလိုပဲ ... ခင်ဗျားတို့မြို့မှာလည်း ...
ရေကောင်းရေသန့်တွေ လိုအပ်နေတုန်းပဲမဟုတ်လား ... ။ ။
LABELS : ကြက်သွန်
0 COMMENTS POSTED BY : ဇာတိ TIME : Friday, September 11, 2009
အရုပ်ကြိုးပြတ် …. ကြိုးတွေပြတ်လို့ …. ကျိုး … ပျက်လို့
ပြဿဒါးဆိုတာ ငါ့အဆင်မပြေခြင်းတွေကိုဟားတိုက်ဖို့ ပြက္ခဒိန်ရဲ့အလိုအတိုင်းရောက်လာ ….
မှတ်မိသလောက် ဒါဟာ `ဗုဒ္ဓဟူး´ရာသီဖြစ်မယ်ထင်တယ်
မင်း …. သွားမယ်ဆိုလည်း စကားတစ်ခွန်းတော့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ် …. နွေရာသီရောက်လာတာကိုက စောလွန်း….
မြစ်ကျိုးအင်းများ၊ မီးစားအိပ်မက်များ၊ မှောင်မိုက်နာကျင်ခဲ့သောလမ်းများ
ဝေး ……….. စကားတစ်လုံးတည်းနဲ့တောင် ဆွေးလိုက်ရတာကွယ်
အထီးကျန်ဝေးကွာမှုသီချင်း၊ လေနဲ့အတူလေနေတဲ့စိတ်၊ ရင်ထဲဟာသွားတဲ့နေရာမှာ ဘာမှအစားထိုး၍မရ၊
ရွေ့လို့လည်းမရပါ …. အခုထိ ဗုဒ္ဓဟူးည ဆယ့်တစ်နာရီ ……
ပန်းနီလေးပွင့်တာကအစ ငေး … ကြည့်၊ ငိုချင်တယ် ……. အ ထီး ကျန်
မျှော်လင့်ချက်ဟာ အရက်စက်ဆုံး လူသတ်လက်နက်ပဲ
မျှော်ရင်း ….. မျှော်ရင်း …. လင့်သွားတာ … လွင့်သွားတာ ….
ငါကလည်း နင့်ကိုမှ ………….
ကွယ် …….. (၂) နှစ်စာ နောက်ပြန်လှည့်မှ ပြယ်မယ့်ကျိန်စာတွေ
ငါ မရှက်မပါဘူးကွယ် ……
`စောင့်ရမှာချင်းအတူတူတော့ ငါအခုကတည်းကစောင့်မယ်၊ နင်သာ မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ ….´
တကယ်ပဲ …. ပြန်လာခဲ့ပါတယ် … လှောင်ရယ်သံတွေ ပွေ့ပိုက်ပန်ဆင်ပြီး …..
နင်က ငါ့အတွက် ဒုက္ခဆုပန်သူ … မီးကျိုးမောင်းပျက် စကားထာတွေဝှက်သူ …. အရောင်မပါတဲ့ သက်တန့်တွေပဲ ပစ်ပေါက်ကျဲချသူ ….
ငါရပ်တန့်နေ … ငါ ကန္တာရကိုဖြတ်နေ
ခရီးပြင်းနှင်ခဲ့တာပဲ၊ မြို့ရိုးတံခါးကိုက မှုန်ပျပျသာမြင်နေရ …..
`ကိုယ်ဆောင်းတဲ့ထီး အစိမ်းလား၊ အပြာလား မသိပါဘူး …´
မိုးကိုမော့ကြည့်နေလား၊ ငါ့ကို ငုံ့ကြည့်နေလားမသိပါဘူး
နတ်ဖွက်တတ်တဲ့ည၊ ဗုဒ္ဓဟူးတပိုင်း တနင်္ဂနွေတပိုင်းည၊ မီးအိမ်တံခါးဖွင့်ထားတဲ့ည၊ သုည …..
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့စွန့်စားခြင်းကို ဘယ်လိုဇာတာအမှားတွေများ လာတပ်ဆင်ကြပါလိမ့်
ငါ့ကိုယ်ငါတောင် မရှာဖွေတော့တာ … နင်လည်းမကြိုးစားပါနဲ့တော့ကွယ်
ငါ့မှာ သက်တန့်တွေပွင့်တဲ့မိုးရာသီတစ်ခုတော့ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်
ပြောခဲ့သလို …. အရောင်မပါတဲ့သက်တန့်တွေ …. နာမ်စိတ်မရှိသောသက်တန့်တွေ …
… အရုပ်ကြိုးပြတ် …
မင်းစိုမှာစိုးလို့ မိုးပေးချင်တာတောင် ကိုယ့်မှာထီးတစ်လက်မရှိပါကွယ်
ဒါဟာလည်း အမှတ်တရတစ်ခုတော့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
နင်က ငါ့ကိုချည်နှောင်တာမဟုတ်ဘူး ….. ငါ့ကိုယ်ငါ ချည်နှောင်ပစ်ခဲ့တာ …..
အိမ်မပြန်ချင်သေးပါဘူး …. ၁၃ ရက်နေ့မှ မရောက်သေးတာ …… အိမ်မပြန်ချင်သေးပါဘူး …. ၁၃ ရက်နေ့မှ မရောက်သေးတာ ….. ၁၃ ရက်နေ့မှ …. ပြေရင်းဆိုရင်းကပဲ ၁၃ ရက်နေ့ရောက်လာပါတော့တယ်
အိုး …. တိုက်ဆိုင်လိုက်ပုံ ……
၁၃ ရက်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျသွား ……. ငါ.. ထွက်ခွာလို့ရပါ့မလား …..
ငါနဲ့ ငါ့နာရီလေးကတော့ တစ်နေရာတည်းမှာ အကြာကြီးရပ်နေ …..
သမိုင်းတစ်ခုဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ် … ဒါပေမယ့် သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုတော့ ဖြစ်နိုင်
ဒီမှာ ….. အရုပ်ကြိုးပြတ် မျက် ၀န်း တွေ . . . .
အခုတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေချည်း …. အာရုံခံစားမှုအလွဲတွေချည်း …….
ပထမ ….. တစ်ယောက်တည်း သင်းကွဲသောညနေ …… နောက် … သူ့ကိုယ်သူချော့သိပ်နေသော ပြောမပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံပြင်လေး …. နောက် … သစ်ဂျပိုးခေါက်ကိုမုန်းတဲ့ကော်ဖီ … မှတ်တိုင်လေးဟာ လူတွေကြားမှာ သောင်တင်နေ …… အိမ်ပြန်လို့မရဘူး
ခြောက်ခြောက်အက်အက် ငါရယ်တယ်… ငါပဲမှားသွားပြန်ပါတယ်
တကယ်တော့ငါက အန္ဓပါ … တေလေပါကွယ် ….
အသူတရာကမ္ဘား၊ ကုမ္ဘာဏ်တစ်ထောင်တံခါး၊ ခြောက်ခြားပူခြစ်မီးလျှံများ …. အဲဒီကြားကနေ နင်လက်ကလေးကို ငါ့ဆီဆွဲမယူရက်ခဲ့ဘူး
အဲဒီလိုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဆီ ……. တစ်ယောက်တည်းသင်းကွဲနေသော …….. ဆန့် ကျင် ဘက် တွေ ……
ငါ့..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..
.. ကိုယ်..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ငါ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... ..... ခ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
... ..... ... ..... ..... ..... ဏ..............
. ..... ..... ... .....တ..... ..... ..... .....
... .....ဖြုတ်..... ..... ..... ..... ..... ..... .
...... .....ပျောက်..... ..... ..... ..... .....
....... ..... ..... ..... ..... ..... ဆုံး..... ....
... ... ..... .....သွား..... ..... ..... ..
... ........ ..... .......... .....တယ် ..
ဘ၀က ဖိနပ်ကို ကြိုးငုံ့ ချည်နေတုန်း ........ မစံပယ်ဖြူက ကျွန်တော့်ကို မုန်းသွားသည်....
ငါ့မှာတော့ ဖိနပ်လိုက်ရှာနေတုန်းမှာတင် အမုန်းခံလိုက်ရတာပါကွယ်။ ကဗျာဆိုတာ အချစ်ဦးမသိ အောင်ရေးရတဲ့အရာ ……..
ငါက နင့်အငွေ့အသက်လေး .. နင့်အရိပ်လေးကတောင် အသိအမှတ်ပြုတာ မခံခဲ့ရတဲ့ကောင်
သီချင်းတွေ ဆိုပြချင်ပါသေးတယ် … စစ်တုရင်ထိုးနည်းသင်ပေးချင်ပါသေးတယ် ….
နယ်ရုပ်တွေဟာ နယ်နယ်ရရ အရုပ်တွေမဟုတ်ကြောင်း သိစေချင်သေးတယ်
ဒါပေမယ့် … အခုထိ ဗုဒ္ဓဟူးပဲဖြစ်နေ …. ညဆယ့်တစ်နာရီဖြစ်နေ …
တချို့က ဘ၀မှာ ကြယ်တွေလတွေတောင် ကြွေခဲ့ဖူးပါသတဲ့
ငါကတော့ ဘာမှမဟုတ် …. ငါ့ဆေးလိပ်ပြာက ငါ့ကို တဖြုတ်ဖြုတ်ခြွေချနေ …. ငါ့သက်ပြင်းက ငါ့ကို ခြွေချနေ … အခုထိ အရုပ်ကြိုးပြတ် လရောင်တွေ ……
ရေရွတ်ကြည့်တော့ လေထုထဲ တိုး--အက်---မော--လျ ….
ငါ့ အသံတွေ….. ငါ့ အက်သံတွေ……
ပြဿဒါး ဟာ ဓားတစ်ချောင်းလို “ထက်” လို့ ………. ပြဿဒါး ဟာ ငါ့ပြက္ခဒိန်တွေထဲ “ထပ်” လို့…….
ခေါ်သံတွေ မရှိတော့ပေမယ့် ထူးနေခဲ့ပါတယ်ကွယ်…
ချစ်လှစွာသော... ငါ့ရဲ့ညီမသေးသေးလေးရေ...လွမ်းတယ်၊ ... ဒါပဲ တတ်နိုင်တာမို့ လွမ်းပါရစေ
ကမ္ဘာမြေကြီးကတော့ ကျဉ်းပါရဲ့၊ မိုင်တွေကသာ ကျယ်နေတာ…
ခေါ်သံတွေ မရှိတော့ပေမယ့် ထူးနေ…
ဘယ်ကို လွင့်စင်ရမယ်မှန်း မသိဘူး … မသိဘူး … မ သိ ခဲ့ ဘူး ..
ကောင်မလေးရေ....တို့တွေ နားလည်လိုက်ရအောင် မင်းနဲ့ငါ တကယ်နားလည်သွားသလိုပုံမျိုးနဲ့ နားလည် ပစ်လိုက်ကြရအောင်လေ....................
အရာရာဟာ အရာရာ ထဲ နစ်မြုပ်လို့…၊၊ သစ္စာတရားကို ဖက်တွယ် လိုတဲ့ ငနဲတစ်ယောက်ရဲ့ ကျဆုံးခန်းပေါ့ ….
ခြေထောက်တွေကလှေကားထစ်အတိုင်းတက်သွားပြီး လူက... လှေကား ခြေရင်းမှာ ကျန်ခဲ့ရတယ်
ဗျပ်စောင်းသံရဲ့ တိတ်ဆိတ်မှု့က ငါ့ကို ခေတ်အဆက်ဆက် ခြောက်လှန့် ... ငါတို့တွေ ကြိုးပြတ်နေကြပြီ ၊၊ ငါတို့တွေ ကျိုး ပျက် နေ ကြ ပါ ပြီ
ငါဆိုတာ နင်လှောင်ရယ်ပစ်ခဲ့တဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်တစ်ယောက်လား …. ငါဆိုတာ နင်လုံးဝမကြိုက်တဲ့ အက်စ်ပရက်စ်စို ကော်ဖီတစ်ခွက်လား …. ငါဆိုတာ နင်လွှင့်ပစ်လိုက်တာခံရတဲ့ လက်ဆောင်ပန်းစည်းလေးလား ….. ငါဆိုတာ … ငါဆိုတာ… ငါဆိုတာ ဘာလဲကွယ်…
ပြောပါ ... ငါ ရပ်နေရမှာလား ၊ ဆက်လျှောက်ရမှာလား ဆိုတာကို..
ငါ့ကိုဖျောက်ထားတဲ့ နှင်း ...
မိုင်တိုင်တွေ လဲကျတုန်း ငါ့ကိုကယ်ပါ ...
ညတွေပျင်းရိတုန်း ငါ့ကိုကယ်ပါ ...
အလွမ်းတစ်ဆူလင်းသစ်ဖို့ နင်ရဲရဲသာ ဖြန့်ကျက်ထားစမ်းပါ..
ပြီးရင်... ငါ့ကို ကယ်ပါ .... ပြီးရင် ....
ဟာသကားတွေထဲမှာတော့ အခုလိုဖြစ်သွားရင် ရယ်ကြပါတယ်
`ဗုဒ္ဓဟူး´ရာသီမှာ တနင်္ဂနွေဟာ အလာ့ဂျစ်ထနေ ………..
၀န်ခံချက် - ယခုကဗျာတွင် တာရာမင်းဝေ ၊ မင်းခိုက်စိုးစန် ၊ တိုးနှောင်မိုး ၊ ဇာတိ ၊ သိုးမဲ၊ သူရဿဝါ၊ ၊ ၀ိုင်ချို ၊ သောတ ၊ ပိုင်စိုးဝေ ၊ ရွှေယုန် ၊ ရုပ်သေး တို့၏ ကဗျာစာပိုဒ်အချို့ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါသည်။
LABELS : လျှောက်လမ်း
ဝေး ... ပြီ
မုတ်သုံ အဆက်ဆက် တိုင်ခဲ့ပြီ။
ကြယ်တွေ ကြွေခဲ့ ညအလီလီ။
ဝေးခဲ့ လေပြီ အို....နှင်းဆီ။
အကြမ်းဖက်သမားဆိုတာ … ဘယ်သူလဲ
LABELS : မိုးလှိုင်ည
မိယု မစားသွားသော ပန်းသီး
ဒီလို မိယုရ . . .
နင့်ခေါင်းပေါ် ရောက်လာမယ့် ` ကလစ် ´
ဒါ ဆယ့်နှစ်နာရီထိုးမှ ကြားနေကျ အသံပါ
တိမ်တွေနောက် လိုက်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ
ဒီလောက်လဲ မချိုပါဘူး မိယုရယ် . . .
သားကိုက အိပ်မက်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရချင်တာပါ . . .
ဟော . . . ဟော . . .
အဲ့တာ မကောင်းဝါးဆိုးတွေ အသံပေါ့
ဒီလိုနဲ့ တစ်နာရီခြားဆီ ဝေးသွားကြ
နေပါဦး မိယုရယ် . . .
ရင်ဘတ်မဲမဲတွေပေါ် မတပ်မဖြစ် ကြယ်သီးတွေ တပ်လို့
စနေမိုးပါ မိယုရယ် . . .
သား သူ့ကို သတိရလွန်းလို့ပါ မေမေ
သူ့ဟာ နဲ့ သူ နေတာပဲ မိယုရ . . .
ငါတို့ လိပ်ပြာတွေကိုက သန့်သန့်လေးရယ်
တရေးနိုး ထ ပြီးတော့ မိုး ကြည့်ရတာ
ဒီနှစ်ကိုက ကံဆိုးရာသီလေ . . .
ငါတို့က တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်
` ထောက် ´ ထားတဲ့
၀ါးဆစ်ပိုးတွေကိုး . . . ။
ဒီလိုနဲ့ ပန်းတွေ ပွင့်လာကြစေသတည်းပေါ့
မိယုရယ် . . .
ဒီလို မေမေ ဒီလို
ကြယ်တခြမ်း လတခြမ်းနဲ့ ( . . . . . . . )
မြုပ်လိုက် ပေါ်လိုက်ပါပဲ မိယုရေ
ဆွေး . . . ဆွေး . . . ဆွေး
ဆွေး ဆွေး လေး
သူတို့ ပျေက်သွားပြန်ပြီ မေမေ
ဟိုးနားက ကျပ်ခိုးတွေပေါ်မျာ ကပ်
` ချောက် ´ ဆို တံခါးပိတ်သွားတဲ့
ငွေ့ ငွေ့ လေးပဲ လောင်သွားတာ မိယုရဲ့
ငါတော့ သေမှာပဲ . . . မိယုရယ် . . . ။
LABELS : ရုပ်သေး
အရှေ့မှာ ... မိုးတိမ်တွေပြိုနေတာ
ဒီမှာ အစိမ်းလိုက်ချုပ်ထားရသော နှလုံးသားနဲ့
လွမ်းဖျား လွမ်းနာ ကျ
မီးလိုလောင်နေသော ညတွေ ..
ဒီတော့ . . . အရာရာကို ပြန်စဖို့အတွက်
နတ်သမီးရယ် . . . . . . .
တကယ်တော့ငါကလည်း ငါပါပဲ ...
ယင်းထအိပ်မက် ၊ အဆိပ်တက်စက္ကူငှက်ရုပ်များ
ဒီအတိတ်တွေကြား . . . . . .
နတ်သမီးရယ် . . . . နတ်သမီးရယ် . . .
နတ် သ မီး ရယ် . . . .
ဒါကို သင်္ခါရလို့ မပြောနဲ့
ဒါကို ... ဒါကို
နင့်ရဲ့ရှေ့မှာ . . . . ပြီးတော့ ငါ့ရဲ့ရှေ့မှာ
နတ်သမီးရယ် . . . . .
ကြယ်တွေခြွေချထားရစ်ခဲ့တယ် ။ ။
ဇာတိ + သူရဿဝါ + ရိုးရာ + ကြက်သွန်
0 COMMENTS POSTED BY : ဇာတိ TIME : Wednesday, September 02, 2009
တိမ်လူကလေး ရဲ့ သက်တန့်စာ
အဲဒီလမ်းက . . .
ငါ မသိ . . .
ငါ မရှိ . . .
ငါ မထိ . . .
ငါ မရိ . . .
နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် . . .
ကလေးမရယ် . . .
တိမ်ဆိုတာ .. မြူခိုးတွေနဲ့
ဆောင်းငွေ့ငွေ့နဲ့ နှင်းတပွင့်ကို မြင်ရင်
သုန်သုန်လင်းနေပြီ . . .
မိုးမချုပ်မှီ . . .
ဟိုးက . . .
စောင်းသံ ယဲ့ယဲ့ကို ကြားရတယ်
မြင်းခွာသံတွေကြားမှာ . . .
နိုးတဝက်ဖြစ်တဲ့ တေးတပုဒ်နဲ့ ငါ့ကို လှုပ်နှိုးတယ်
မလှောင်ပါနဲ့ကွယ် . . .
ကျိူးကျိူးနွံနွံ ငါ့မှာလည်း . . .
ဒါပေမယ့်လေ . . .
ငါ့ကို . . . ဒုန်းဆိုင်းပြီး
သွေးတမြမြ . . . ငါ့ နှလုံးသွေးကို
ရထားဟာ ဘူတာကို စွန့်ခွာထွက်ပြေး
ငါ … ဘူတာရုံလေးလို မဖြစ်ချင်ဘူး
ရမယ်ဆိုရင် ကလေးတယောက်လိုပြေးလိုက် . . .
မထားခဲ့ဖို့ ပြောရင်း ထွေးပိုက်ထားစေချင်တယ်
တနင်္ဂနွေတိုင်း နင် အပိုင်သာယူပါတော့
ငါ့ကို ခေါ်ပါ . . .
ပုရပိုဒ်တခုကို ထမ်း. . .
နင့်ကိုငါ လွမ်းမယ် . . .။
LABELS : သောတ
ဂီတတစ်ပုဒ် ထုဆစ်လိုက်ကြတယ် ။
ငါ. . . ဘာမှမသိလိုက်ရဘူး နှင်းဆီဝါရယ်
ငါ. . . ဘာမှ မသိခဲ့ရပါဘူး ။
ပြန်ချော့ခေါ်လို့မရဘူးကွယ့် . . . ။
သေမလောက် ဝေးခဲ့ရတယ်. . . ။
မလွမ်းချင်ဘူးဆိုပြီး . . . ငါ
. . . လွမ်းတယ်. . . ။
အားပါးတရ ရွာပြလိုက်ချင်တာပေါ့ ။
ဟောဒီ ခြောက်သွေ့သွေ့ကောင်ရဲ့ ရာသီဥတုမှာ
နွေရောက်ခဲ့တာ ကြာပါပြီကောလေ. . . ။
ဟိုး. . . တုန်းက
ဒီနေ့. . .
ကိုယ့်ကို တစ်ဖဲ့ချင်းခြွေချနေကြတယ် ။
“စုန်းမ”မှန်းသိရတယ် . . . ။
ကုပ်ပိုးမှာ “ဘို့” ထွက်လာမှ
မီးခိုးတွေ “အူ” တက်လာတဲ့အထိ
ကိုယ့်မှာပဲ. . .
တမြေ့မြေ့ ပြာ. . . ကျ . . . ၊၊ ၊၊
~ ကောင်းကင်အလွန်ချိုင့်ဝှမ်း၏ တူးဆွခြင်း ~
1 COMMENTS POSTED BY : ဇာတိ TIME : Wednesday, September 02, 2009
ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ် ။
“ ငါ ” တဖြစ်လဲ ” ငါ မဟုတ်တဲ့ ငါ ” ၊
သို့မဟုတ် ..... .....
ခြေ လက်အင်္ဂါတို့ မပါရှိဘဲ
ဦးခေါင်းပိုင်း နှင့် ကိုယ်ထည်ပိုင်း တို့သာ ၊
သော့အထပ်ထပ် ခတ်ထားတဲ့ ဦးခေါင်းခွံကို
ဖွင့်ဟပြီး တခုစီ ထုတ်ယူကြည့်မိရာ
ပြက္ခဒိန်ဟောင်း ၆ ခု ၊
ထို့နောက် ..... ..... .....
ထက်ပိုင်းကျိုး ဆေးလိပ်တိုများ ၊
တဖွားဖွား တောက်နေတဲ့ မီးကြွင်းမီးကျန်များ ၊
တဟုန်ထိုးစိုက်၍ကျဆင်းနေသော လေတံခွန် ၊
သွေးထွက်သံယို ပုစ္ဆာတချို့  ၊
အောက်စီဂျင်နပ်မမှန်သော နေ့စွဲအထပ်လိုက် ၊
အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ရလာဒ်များ ၊
မှိုတက်နေသော လက်ရေးစာမူ ၊
ဟိုးအောက်ခြေနားမှာလည်း ပစ္စည်းတချို့ 
ဖျတ်ခနဲ တွေ့လိုက်ရတယ် ။
သုညမပီသသေးတဲ့ ( သို့မဟုတ် )
( ၁ ) တစ် ဖြစ်နေဆဲ သုညတစ်လုံး ၊
ညဘက်အိပ်မပျော်တတ်သော ရောဂါ ၊
( ညာဘက်ထောင့်စွန်းမှာ ကပ်နေလို့
ဒဿနအတွေးအခေါ်တချို့  ၊
အိပ်မက်တခုစာ ဆောက်ထားတဲ့ ခရမ်းနုရောင် တိမ်တိုက် ၊
( ထွက်ပြေးနေလို့ မနည်းနဖားကြိုးပြန်ထိုးလိုက်ရတယ် )
ဘာတွေကျန်ဦးမလဲလို့ သွန်ချကြည့်လိုက်တယ် ။
ခွဲထားတာကို နေသားတကျ ပြန်ချုပ်တော့မှပဲ
လှစ်ခနဲ တခုမြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်သေးတယ် ။
လက်နဲ့ စမ်းကြည့်တော့လဲ မထိမိဘူး ။
ဟုတ်တယ် ..... ..... .....
အဲဒါ “ ပြီးပြည့်စုံသော မရှိခြင်း သဘောတရား ”
ဒီတခါရော ဘာတွေထွက်လာဦးမလဲ ၊
ဒီရင်ဘတ်ထဲ ဘာတွေရှိနေမလဲ ၊
ဘာတွေ ..... ..... ဘာတွေ ..... .....
ဘာတွေ .....ဘာတွေ ..... ဘာတွေ
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....
ကျောရိုးတလျောက် ခွဲချကြည့်လိုက်တယ် ။
မသုံးဖြစ်ခဲ့သော ငွေအကြွေစေ့ ၁၂ စေ့ ၊
စာအုပ် ၃ အုပ်စာခန့် ရေးလက်စ စက္ကူစုတ်များ ၊
အမှောင်ထဲမှာပင် ခလုတ်လာလာတိုက်သော ပြဿနာများ ၊
လက်ဗွေရာမျိုးစုံနှင့် ဂဏန်းပေါင်းစက် ၊
အစွယ်ချိုးချိုးနေရတဲ့ တောကြီးမြွေဟောက် ၊
ချဉ်သိုးသိုးအနံ့ရတာနဲ့ နဲနဲမွှေကြည့်လိုက်တယ် ။
ဝေမျှရန် ဆိုသော ပေါင်မုန့်တစ်လုံး ၊
မိုး လေကင်းစင်တဲ့ စပျစ်သီးချဉ် ၄ လုံး ၊
အရောင်မွဲမွဲ ကချင်လွယ်အိတ်တစ်လုံး ၊
နှုတ်ခမ်းပဲ့ ဖန်ခွက်တစ်လုံး ၊
ပျောက်ဆုံးနေသော တထောင့်တည ပုံပြင်များ နှင့်
အရှိုက်တည့်တည့်ကို မှန်တဲ့ စကား နှစ်ခွန်း ။
လက်အံသေလာတာနဲ့ သွန်ချလိုက်တယ် ။
လတ်စမသတ်ရသေးတဲ့ ရင်ခုန်သံ လက်ကျန် ၊
ဘယ်သူရွေ့ သွားမှန်း မသိတဲ့ ဒိန်ခဲ ၊
ကကြိုးတန်ဆာတောက်ပနေတဲ့ မြင်းရိုင်းတစ်ကောင် ၊
မြှားချက်ဗလပွနဲ့ ကတုတ်ကျင်း ၊
မဆုတ်ဖြဲဖြစ်ခဲ့သော စစ်မျက်နှာစာ ၊
ရင်ဘတ်တချက်တချက် အောင့်ခြင်း နှင့်
ယခု ရေးနေသော ကဗျာ ။
ဘာမှ ထပ်ပြီးကျမလာတော့ဘူး ။
ညီစိမ်း ( သိုးမဲ )
LABELS : ညီစိမ်း
မှော်မလေး ဖတ်ဖို့ … (၁)
0 COMMENTS POSTED BY : ဇာတိ TIME : Tuesday, September 01, 2009
( ချစ် . . . တယ် )
ဒါ… သတိလက်လွတ် “တ” မိတဲ့
မတော်တဆ ခလုပ်တစ်ချက်ပါ .. ၊၊ ၊၊
ခင်ဗျားလေး ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာဖြစ်ဖြစ်
ခင်ဗျားလေး ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာဖြစ်ဖြစ်
တိုးတိုးလေး မှောင် ချင်ပါရဲ့
တိုးတိုးလေး လင်း ချင်ပါရဲ့
ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုရင် နဲ့ပဲ “စ” ချင်တယ်
မတော်တဆ “တ” မိတဲ့
အရုပ်ကြိုးပျက် ခလုပ်တစ်ချက်ပဲ ဖြစ်မှာ…
တယ် ….. ၊၊ ၊၊
ပြင်ဆင်နေဆဲ အခိုက်အတန့်ဖြစ်နေပါသဖြင့် …စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာရှိက တောင်းပန်အပ်ပါသည်
HOE ( Hands Of Enlightenment )
ခင်ဗျား မျက်လုံးထောင့်က မျက်ချေးတွေကို Recycle လုပ်ပစ်လိုက် - မင်းလုလင် ၊ ဆူးခက်မင်း - - ခင်ဗျား မျက်လုံးထောင့်က မျက်ချေးတွေကို Recycle လုပ်ပစ်လိုက် ကမ္ဘာကြီးက သူ့အလိုလို လည်ပတ်နေတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့က ချစ်ခြင်းမေတ္တာနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် ဘာကြောင...
PEM sKoOL [P1U5 = MiNuS]